सिमरामा रात्रि उडान | नेपाली जनता :: Nepali Janta:
सिमरामा रात्रि उडान
प्रकाशित मिति २५ भाद्र २०७५, सोमबार १४:०० लेखक नेपाली जनता
बारा । सफल परीक्षण उडान गरेको चार वर्षपछि बाराको सिमरा विमानस्थलबाट नियमित रात्रि उडान हुने भएको छ ।
झण्डै दुई वर्षको तयारीपछि ०७१ पुस महिनामा परीक्षण उडानसमेत गरेको विमानस्थलले ढिलै भए पनि यही ३१ भदौदेखि रात्रि उडान सेवा सुरु गर्ने भएको हो ।
अर्को साताबाट दिवा उडानको अलावा बुद्ध एयरले सिमरा विमानस्थलमा नियमित तीन वटा रात्रि उडान सेवा सुरु गर्ने भएको छ । हाल बुद्ध एयरले दैनिक ६÷७ र नेपाल एयरवेजले एउटा दिवा उडानको सेवा दिँदै आएका छन् । हाललाई यस विमानस्थलमा बुद्ध एयरले नै नियमित रात्रि उडान गर्न सक्ने विमानस्थल कार्यालयका प्रमुख हिराजन काफ्लेले बताए ।
बारा, पर्सा, रौतहट, सर्लाही र मकवानपुर जिल्लाको केन्द्रविन्दुको रूपमा रहेको यो विमानस्थलमा साँझ ६ः३० देखि राती ८ः२० बजेसम्म उडान हुनेछन् ।
रात्रि उडानको लामो प्रतिक्षा गरिरहेका यस क्षेत्रका उद्योगी, व्यवसायी, भारतीय पर्यटक र सर्वसाधारण समेतलाई रात्रि उडानपछि राजधानी आवतजावत गर्न सहज हुनेछ । यस विमानस्थलमा छिमेकी राष्ट्र भारतको बिहारबाट देशको राजधानी काठमाडौं जाने यात्रुको संख्या पनि बढेको पाइएको छ ।
काठमाडाैंको त्रिभुवन विमानस्थलबाट सबैभन्दा नजिक रहेको यस विमानस्थललाई असहज परिस्थितिमा विकल्पका रूपमा प्रयोग गर्न सकिने हुँदा पनि सिमरा विमानस्थलको रात्रि उडान महत्वपूर्ण मानिएको छ ।
काठमाडौं । संस्कृति र सभ्यता संरक्षणका लागि दाताले दिएको चलअचल सम्पत्ति हकभोग गरेबापत सरकारले दिनुपर्ने बक्यौता तथा मुआब्जाको अर्बौं…
काठमाडौं । ‘तपाईंलाई के काम दिऊँ ? रुची केमा छ ?’ झण्डै १५ महिनादेखि भूमिकाविहीन केन्द्रीय नेतालाई अचेल नेकपा…
जाजरकोट । सदरमुकाम खलंगामा पिउनेपानीको हाहाकार छ । गर्मीयाममा पानीका मुहान सुक्ने, सदरमुकाम आसपासमा रहेका पानीका मुहानको मर्मतसम्भार तथा…
माओवादी केन्द्रका बिनाविभागीय मन्त्रीहरुले राजीनामा दिने, कसकसले दिंदै छन ?
काठमाडौं । बिनाविभागीय मन्त्रीका रुपमा सरकारमा रहेका माओवादी केन्द्रका मन्त्रीहरुले राजीनामा…
ठेक्का सम्झौतालगत्तै ठेकेदारलाई २० प्रतिशत पेस्की दिनु…
यसरी फस्छन निर्दोष डाइभर साउदी अरवमा
काठमाडौँ । साउदी अरबमा सवारी चालकको काम गर्न गएका झापाका प्रशान्त लिम्बुले ब्लडमनिबापत ३६ लाख ८१ हजार रुपैयाँ बुझाएर…